Ogaden News Agency (ONA) – Qudbadii Ururka Haweenka London ee laga jeediyay shirkii Lagu soo dhaweeyay Madaxda JWXO
Qudbadii Ururka Haweenka London ee laga jeediyay shirkii Lagu soo dhaweeyay Madaxda JWXO
Posted by ONA Admin	/ May 11, 2015
Marwooyin, mudanayaal iyo madaxdeena JWXO
Guddoomiyaha JWXO Admiral Maxamed cumar Cismaan, Guddoomiye ku xigeenka JWXO ahna Gudoomiyaha Jaaliyaadka Mudane Maxamed Ismaaciil
Mudane Cabiraxmaan mahdi, Mudane Axmed Yaasin Sheikh ibraahin, Mudane Maxamed Cabdi Yaasin (Xaai Diirane) iyo dhamaan xubnaha Golaha dhexe jwxo ee inala jooga.
Martida sharafta leh iyo dhamaan bulshada kasoo qeyb-gashay Shirkan qiimaha badan waxaan idinku salaamaya salaanta Islaamka Asc Wrt Wbt.
Aniga oo ku haldaya Magaca Ururka Haweenka Soomaalida Ogaadeeniya ee heer adduun, waxaa sharaf ii ah maanta in aan halkan soo istaago oon idinla qeybsado fariinta ururka haweenka Soomaalida Ogaadeeniya.
Waxaan maanta kufaraxsanahay hadii aan nahay Ururka haweenkab Soomaalida Ogaadeeniya in aan sameysanay dallad guud oo matasha dhamaanba Haweenka Soomaalida Ogaadeeniya meel kasta oo ay joogaan. Ururka Haweenka Soomaalida Ogaadeeniya ma ahan mid hada la aasaasay ee waxa uu soo jiray muddo aad u dheer waxa uuna la fac yahay halganka Soomaalida ogaadeeniya. Haweenku waa laf dhabarta halgamadii hore illaa axmed gurey, midkii sayidka, Jabhadihii 60 meeyadii ee nasrullaahi, halgankii Soomaali galbeed iyo midka maanta ay hogaaminayso JWXO.
Mudadaas dheer ee loo halgamayay mideynta soomaaliyeed Iyo xorreynta dhulka Soomaalida Ogaadeeniya kaalinta haweenka soomaalida Ogaadeeniya waxay aheyd mid hormuud ah.
Balse muddadii qurbaha lasoo galay, waxaa dib loo soo nooleeyay urur weynahaas haweenka Soomaalida Ogaadeeniya sidii uu uga howlgali lahaa wadamadan aan ku noolnahay. Markii ugu horeysay waxaa laga bilaabay ololahaas waddanka UK.
Ururada haweenku waxa intooda badan ku hoos jireen jaaliyadaha, Balse mudadaas laga bilaabo waxaa sameeyay maamulo ay leeyihiin ururada haweenka qaaradaha Europe, USA, Canada, Australiya, Carabta iyo Afrika. Hase yeeshee waxaa lagama maarmaan noqotay in lamideeyo oo dallad guud loo sameeyo.
Alxamudlillaahi Barnaamijkaas Dallad u sameynta ururada haweenka Soomaalida Ogaadeniya waxaa uu ku qabsoomay Waddanka Denmark, daba-yaaqadii sannadkii hore.
Jaaliyada Soomaalida Ogaadeeniya ee Denmark ayaana marti galisay kulankii dallada loogu samaynayay Ururrada Haweenka. Jaaliyadaas oon ognahay inay had iyo jeer fududayso isu imaatinka ururada bulshada, aad ayaanugu amaanayaa. Shirwaynahaas waxaa lagu doortay maamul guud oo ay yeeshaan ururka haweenka soomaalida Ogaadeeniya.
Waxaa halkaas lagu yagleelay, qorshaha ururka haweenka Soomaalida Ogaadeeniya,Xeerkii ay ku howlgali lahaayeen iyo qorsho shaqeedka daladda ururka Haweenka Soomaalida Ogaadeeniya. Ilaalinta xuquuqda haweenka, sinaanta iyo cadaalada.
Ururka haweenka Soomaalida ogaadeeniya waa ururka ugu saameynta badan ururada haweenka ee kasoo jeeda geeska afrika ee ka howlgala Qurbaha.
Haweenka tirada dadweynaha adduunka waxay ka joogaan 50%. Caalamka horumaray waxaan aragnaa iyadoo laga cabanayo in Haweenku ay la kulmaan cadaadis aad u xoog badan oo ayna helin cadaalad, isla markaana laga takooro dhinacyada dhaqaalaha, siyaasasada, waxbarashada, caafimaadka, codkoodana la xaqiro.
Hadii caalamkii xorta ahaa uu dhibaatoyinkaas ka sheeganayo maxaad u malaynaysaan haweenka ku hoos nool gumeysiga iyo dhulka colaadaha ay ka jiraan.
Haweenka somaliyeed maanta waxaa heysta dhibaatada ugu badan ee bani aadam soo gaadha.
Xeryaha qaxootiyada ee Dhadhaab, Yemen iyo meelo kaloo badan waxaa ku tabaaleysan dad soomaaliyeed oo u badan dumar iyo carruur.
Waxaa habboon inaan is-waydiino, maxaa dadka soomliyeed dhibaatadaas ugu wacan. Qarankii Somaliyeed maxuu u dhismi la’yahay. Dhibaatooyinkaas oo dhan waxaa saldhig u ah gumaysiga Itoobiya, oo cunsurka soomaaliga ah si isku mid ah ula dagaallamaya. Dagaalka iyo xasuuqa uu ka wado Ogaadeenya, mid la mid ah ayuu bulshada soomaalieed oo dhan ku hayaa. Laakiin nasiib darro waxaad mooddaa in dadka soomaaliyeednayna arintaas ku baraarugsanayn.
Intii ay taas ku baraarugu lahaayeen, waxay qaar badan oo maamullada soomaalida ka mid ah ku mashquulsan yihiin inay shacabka Ogaadeenya ee halganka ku jira gumaysiga u af-celiyaan.
Bulshada somaliyeed hadaan nahay waxaa lagaadhay waqtigii aan danaheena isu taagi lahayn. Waqtigii aan u midoobi lahayn beeninta riyada gumaysiga Itoobiya. Waxaa la joogaa waqtigii hiil iyo hooba lala garab istaagi lahaa shacbkga Ogaadeenya ee gumaysiga la dagaallamaya.
Hadaan nahay haweenkii waxaan diyaar u nahay in aan ka qeyb qaadano siyaasada iyo isbadalka geeska afrika. Waxaan mudnaan siinaynaa qofkasta oo ka shaqeynaya sidii umada somaliyeed ay xoriyad iyo nabad ku heli laheyd,iyo cid kasta oo ka shaqeynaysa horumarinta iyo daryeelka bulshada somaliyeed.
Waxaa la jooga waqtigii aan illaalin laheyn hadaan Somali nahay dareenka haweenka somaliyeed. Waa Waqtigii laga saari lahaa haweenka somaliyeed diifta qaxoontinimo, waa waqtigii hooyada somaliyeed aysan ka walbahaari laheyn ilmaheeda gaajo innuu ku seexdo. Waqtigii hooyada somaliyeed guri keeda ah ay ka soo toosi laheyd iyo daris nabad ah. Waa waqtigii hooyada iyo gabadha soomaliyeed cabsi ka qabi laheyn in guriga nabad ku aado iyada oo cabsi ka qabin askari gumeysi madow ah.
Hadaan nahay Haweenka Somaliyeed ee Ururka Haweenka Ogadeniya waxaan u taaganahay inaan hormuud ka noqono hawl kasta oo halganka loo qabanayo, garab iyo gaashaana aan u noqono geesiyiinta dhiiggooda u huray halganka Ogaadeenya.
Waxaa soo gudbiyay Wariyaha ONA ee Jaaliyada London